लिङ्ग उत्तेजनामा प्रभाब पार्ने, के हो Performance anxiety ? - Younka Kura
लिङ्ग उत्तेजनामा प्रभाब पार्ने, के हो Performance anxiety ?
written by YounKaKura January 15, 2018
यौन उत्तेजित हुन थालेपछि लिंगका धमनीबाट बढी मात्रामा रगत लिंगमा भएको उत्थित हुन सक्ने विशेष तन्तुमा जम्मा हुन थाल्छ, साथै लिंगबाट रगत बाहिर निस्कने क्रम घट्छ र लिंग कडा, मोटो तथा लामो हुन्छ । यसलाई नै हामी लिंग उत्तेजित भएको भन्छौं ।
हामीले इन्द्रियहरूबाट सन्देश ग्रहण गर्छौं । त्यो मस्तिष्कसम्म पुग्छ र चेतन रूपमा हामीले उक्त कुरा थाहा पाउँछौं । यौनसम्बन्धी कुरा पनि यसैगरी हाम्रो मस्तिष्कसम्म विभिन्न तरिकाले पुग्छ । विभिन्न अंग (स्रोत) बाट, सन्देशहरू स्नायुप्रणालीका नसाबाट, विद्युतीय तरङ्ग वा रसायनहरूको माध्यमबाट मस्तिष्कसम्म पुग्छन् र त्यसलाई मस्तिष्कले अर्थ लगाएपछि हामीले थाहा पाउँछौं । यौन उत्तेजना हुने किसिमका सन्देश प्राप्त भए व्यक्तिमा यौन उत्तेजना बढ्छ । व्यक्तिअनुसार कुन किसिमको सन्देश बढी यौन उत्तेजक हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ फरक–फरक हुन सक्छ ।
राम्रोसँग लिंग उत्तेजित नहुने कारण शारीरीक तथा मानसिक दुवै हुन सक्छन् । लिंगको उत्थित हुन सक्ने तन्तुमा रक्तप्रवाहलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि स्थिति लिंग उत्तेजना नहुने सम्भावित कारण बन्न सक्छ । मधुमेह, मृगौलाको खराबी वा कलेजोको खराबी, प्रजनन अंग वा त्यसको स्नायु प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने गरी भएको चोटपटक वा रोग, रक्तनसा वा रक्त प्रणालीमा भएको खराबीले लिंग उत्तेजित नहुने समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । एलर्जी, रक्तचाप तथा मानसिक रोगको उपचारका क्रममा खाइने कतिपय औषधी पनि यसका कारण हुन सक्छन् । पार्किन्सन्स रोग वा क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधीहरूले पनि यस्तो गराउन सक्छ । सार्‍है थकाइ लागेका बेला होस् वा अधिक मादक पदार्थ सेवन गरेकाले होस्, लिंग उत्तेजनामा नकारात्मक असर पारेको हुन सक्छ ।
कतिपय पुरुषमाथि आफ्नो यौन क्षमता प्रदशित गर्नुपर्ने दबाब हुन सक्छ । त्यस्तो भए समस्या अझ चर्को हुनसक्छ । यस्तो स्थितिलाई peformance anxiety भनिन्छ । यहाँ आफ्नो तनाव, चिन्ता वा भय कम गर्न सक्नुपर्छ ।
आत्मविश्वास बढाउने कार्यतिर लाग्नुपर्छ । श्रीमतीसँग लिंग उत्तेजित हुने गरी यौनसम्पर्करहित यौनक्रियाकलापमा पर्याप्त समय बिताए सहयोग पुग्न सक्छ । दुवैले यसलाई आफ्नै समस्या मानेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नु पर्दछ । समस्या कायमै रहे चिकित्सकसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ । यस क्रममा के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भने–उमेर बढ्दै गएपछि लिंगको उत्तेजनामा कमी आउनु स्वभाविक हो ।
Performance anxiety अर्थात् कार्य सम्पादनको चिन्ता
जब कुनै कार्य ठीक तरिकाले हुँदैन कि भनेर चिन्ता गर्न थालिन्छ, बिस्तारै यो चिन्ता बढ्न थालेपछि कार्य सम्पादन क्षमता मै र्‍हास आउन थाल्छ । कति जनाले त यौन क्रियाकलापवाट परहेज गर्छन् अनि आत्मसम्मान घट्न थाल्छ, सम्बन्धमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ । यस विषयमा सधैं चिन्ता गरिरहँदा वा चिन्ता गर्दिन भनेर (कतै आज गर्दा पनि उत्तेजित हुँदैन कि भनेर) त्यसकै बारेमा जहिले पनि सोचिरहँदा यौनकार्य सम्पादनमा सुधार आउँदैन । मनको भय वा चिन्ता हटाउनु आवश्यक हुन्छ । आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । तनाव र चिन्ता कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । कहिलेकाहीं औषधी समेत सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Dr subodh kumar pokharelkumari ko serophero ma suhagraatNepali Health NewsReproductive healthyaun ka kurayounka kura
सम्भोगमा यौन इच्छा
Live Counselling – Baby birth